Vaovao - Ampitomboina ny fahita matetika amin'ny olona mifandraika amin'ny rojo mangatsiaka
Tamin'ny 9 desambra lasa teo dia nanao ny valan-dresaka ho an'ny fisorohana valan'aretina pnemonia miompana amin'ny pnemonia vaovao i Zhejiang. Ireo olona tompon'andraikitra misahana ny biraon'ny fisorohana sy fifehezana ary ny biraon'ny fanaraha-maso ny tsena amin'ny faritany dia nanolotra ny toe-javatra fandrindrana sy fampiroboroboana ny fisorohana ny valanaretina ary ny fivoarana ara-toekarena sy sosialy.
Fantatr'ilay mpanao gazety tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety fa, mba hialana amin'ny fomba mahomby ireo loza miafina amin'ny "fifindran-toerana ara-batana avy amin'ny olona mankany amin'ny olona iray hafa", dia hijerena ny fizahana, ny fandefasana sy ny famoahana entana, ny fitaterana, ny fitehirizana, ny fanodinana ary ny fivarotana sakafo mangatsiaka nafarana avy any ivelany i Zhejiang. , entana hafarana hafa, valizy mpandeha miditra ary entana hafa. Amin'ny maha tompon'andraikitra voalohany amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso ny valanaretina, ny mpiasa amin'ny famoahana sy ny famoahana entana ary ny rohy hafa dia mampihatra ny fepetra fiarovana, manohy manara-maso ny fahasalamana isan'andro, ary mampitombo ny faharetan'ny fitsapana asidra nokleika. Mandritra izany fotoana izany dia hamafiso ny fanandramana asidra niokrika ny lahatsoratra fidirana sy ireo mpitsabo voakasik'izany.Ny isan'ireo santionan'ny mpitsabo, ny santionan'ny lahatsoratra ary ny santionany momba ny tontolo iainana nosedraina isaky ny distrika (tanàna, distrika) isan-kerinandro dia tsy tokony ho latsaky ny 30.
Ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety dia nampandre ny fikirakirana mifandraika amin'ny sakafo hatsiaka nampidirina amina asidra niokrika farany teo:
Tamin'ny 21:00 ny harivan'ny 2 Desambra, ny santionan'ny fanaraha-maso isan'andro ny sakafo mangatsiaka vita amin'ny rojo mangatsiaka nangonin'ny Ivotoerana Yuhuan momba ny fanaraha-maso sy ny fisorohana aretina ao amin'ny tsenan'ny legioma afovoan'ny Chengguan dia hita ny santionan'ny zana-kisoa mangatsiaka nafarana avy any Brezila izay nanaporofo fa tsara ny asidra nokleona coronavirus vaovao. Taorinan'ny rafitra "Zhejiang Cold Chain", niditra teto amin'ny alàlan'ny Seranan-tsabatra Shanghai Yangshan ireo vokatra voarohirohy tamin'ny 28 septambra. Nandray fepetra maika ny faritra eo an-toerana toy ny fitehirizana entana, ny fizahana ny mpiasa ary ny fitokanana ary ny fanafoanana ny toerana. fitsapana asidra niokleika amin'ny tontolo iainana sy ireo mpiasa ivelan'ny tsena mandritra ny alina. Ireo distrika sy distrika mifandraika amin'ny tanànan'i Taizhou izay voarohirohy tamin'ny fanaparitahana ny vokatra dia nanao fanaraha-maso avy hatrany ny entana sy ny fanadihadiana ary ny fanariana. Ny biraon'ny fisorohana sy ny fanaraha-maso koa dia nampandre ireo faritany sy tanàna mifanila aminy. Araka ny antontan'isa, Taizhou City dia nanangona santionany 174 tamin'ny andiam-vokatra mitovy, fonosana ivelany, ary tontolo iainana tafiditra, ary olona 3304 no voamarina. Ny valin'ny fitsapana asidra niokrika dia ratsy avokoa.
Tamin'ny 5 Desambra, nampandrenesin'ny orinasa Wuxi City, faritanin'i Jiangsu, tamin'ny orinasa iray fa ny fonosana ivelany misy ny omby tsy misy bonbon hatrizay nafarana avy amin'ny orinasa dia voaporofo fa voan'ny virus coronavirus vaovao. Zhejiang dia nandamina avy hatrany ny Hangzhou, Ningbo, Huzhou, Jiaxing, Shaoxing, Zhoushan, Taizhou ary faritra fito hafa voarohirohy tamin'ny andiana vokatra mitovy mba hanatanterahana santionany sy fitiliana vonjy maika, fanaraha-maso ny fahasalaman'ny mpiasa ary famonoana otrikaretina, ary nanisy tombo-kase ireo vokatra ho an'ny fanariana tsy maninona.Hatramin'ny 8 desambra dia nisy santionany 4,975 ny vokatra mifandraika amin'izany ary ny fonosana, ny tontolo iainana ivelany sy ireo mpitsabo dia nosedraina sy notsapaina ary ny valin'ny fitsapana asidra nukôika dia ratsy avokoa.
Mba hanatsarana ny fomba fitantanana loop-loop an'ny sakafo hatsiaka nafarana, Zhejiang dia nanao "hetsika feno" amin'ny sakafo hatsiaka nafarana izay miditra amin'ny seranan-tsambon'i Zhejiang na mikoriana mankany Zhejiang amin'ny alàlan'ny seranan-tsambon'i Zhejiang ho an'ny fitehirizana, fanodinana (fifanarahana), ary ny varotra. Fanaraha-maso voafehy voafehy, tsy misy fanesorana ”, nilaza mazava tsara fa“ efatra tsy tokony ”, izany hoe:
Izay tsy misy fanaraha-maso sy taratasy fanamarinana quarantine dia tsy mahazo mivarotra, ireo izay tsy misy tatitra momba ny fitsapana asidra nukôrika dia tsy mahazo mivarotra, ireo izay tsy manana taratasy fanamarinana famonoana otrikaretina dia tsy mahazo mivarotra, ary ireo izay tsy manana kaody loharanom-pahalalana rojo mangatsiaka. tsy avela hamidy ny sakafo, mampihena ny risika amin'ny fihanaky ny valan'aretina sakafo mangatsiaka nafarana.
Ho fanampin'izany, hanamafy ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny virus vaovao amin'ny satro-boninahitra amin'ny entana nafarana sy ny mpiasa mifandraika amin'izany i Zhejiang. Raha jerena ny tranga tato an-trano tato ho ato, amin'ny toetr'andro ambany amin'ny ririnina, dia mety hiparitaka amin'ny alàlan'ny rafitra logistika tsy mangatsiaka ny coronavirus vaovao, izay mametraka fepetra vaovao amin'ny asa fiarovana ara-batana. Mifantoka amin'ny fanatsarana bebe kokoa ny rafitra "fanaraha-maso sy fanaraha-maso + fanokanan-tena fototra + fanaraha-maso mazava tsara", nametraka torolàlana momba ny fisorohana sy ny fifehezana ireo lahatsoratra fidirana sy ireo mpiasa mifandraika amin'izany i Zhejiang. Anisan'izany, ny entana hafarana rehetra izay entin'ny sidina iraisam-pirenena na amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo mankany amin'ny firenena, ankoatry ny entam-barotra lehibe, dia fitandremana ary simba tanteraka amin'ny fitaovam-pitaterana sy ny fonosana ivelany an'ireo vokatra; ny ety ivelany amin'ny valizy voamarina ho an'ny mpandeha miditra dia ampandalovina amin'ny fehikibo mpampita seranam-piaramanidina Amin'ny ankapobeny, ilaina ny famonoana otrikaretina alohan'ny fitrandrahana. Ny asa famonoana otrikaretina dia manaraka ny fitsipiky ny fiarovana, ny fahombiazana ary ny fandidiana mety, izay tsy vitan'ny hoe mampihena ny lozam-pifamoivoizan'ny vorona satroboninahitra vaovao amin'ny alàlan'ny entam-barotra nohafarana, fa mampihena ny rohy sy ny fandaniana tsy ilaina ihany koa.
Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra tompon'andraikitra amin'ny Office of the Provincial Leading Group for Prevention and Control, Zhejiang dia tsy nanana tatitra momba ny tranga vaovao voamarina ao an-toerana nandritra ny 175 andro misesy; misy tranga 4 voamarina ao amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao, ary tranga 27 misy aretim-panafody asymptomatika dia mbola eo ambany fanaraha-maso ara-pitsaboana, miditra any ivelany avokoa.
Noho ny fisian'ny tranga matetika any Manzhouli City of Inner Mongolia Region, Distrikan'i Zhalai Nuoer ao amin'ny tanànan'i Hulunbuir, Distrikan'i Pidu ary Distrikan'i Chenghua ao amin'ny tanànan'i Chengdu any amin'ny faritanin'i Sichuan, araka ny fepetra takian'ny mekanisma fanaraha-maso mazava tsara an'i Zhejiang, ireo izay voasokajy ho atahorana na atahorana ireo izay tonga tany Zhejiang ary niverina tany Zhejiang avy any amin'ny faritra, raha tsy afaka manome taratasy fanamarinana andrana asidra nokleika ratsy ao anatin'ny 7 andro alohan'ny hahatongavany any amin'ny toerana nalehany, na “code code health” maitso kaody misy ny fampahalalana, hoentina any amin'ny toerana voatondro izy ireo toy ny toerana fanompoana feno eo an-toerana ho an'ny fanandramana asidra nokleika; ny vokany dia ratsy Afaka mikoriana malalaka sy milamina izy eo ambanin'ny fahitana ny fandrefesana ny mari-pana ara-dalàna sy ny fiarovana manokana.
Ho fanampin'izany, noho ny fisian'ny valanaretina tany Kashgar, voafehy i Xinjiang, ary i Zhejiang dia nahena ho amin'ny ambaratonga ambany amin'ny risika manerana ny faritra, dia tsy mitaky intsony ireo mpiasa mandao an'i Kalai sy Zhejiang hiverina any Zhejiang hanome taratasy fanamarinana fitsapana asidra niokleika ratsy. Ho an'ireo miverina any Zhejiang avy ao amin'ny Distrikan'ny Seranan-tsabatra Dongjiang ao amin'ny tanànan'i Tianjin, ny faritra Binhai New ary ny faritra Shanghai Pudong New, izay nahena ho ahiana kely, dia tsy ilaina intsony ny taratasy fanamarinana andrana asidra nokleika ratsy.
Hatramin'ny nivoahan'ny valan'aretina, dia nahamarika tsimoramora ireo ekipazy mararin'ny satro-boninahitra vaovao avy any amin'ireo sambo iraisam-pirenena namboarina tany Hong Kong i Zhejiang. Ny fanamafisana ny fisorohana ny valanaretina amin'ity sehatra ity dia ampahany lehibe amin'ny fidiran'ny fiarovana avy any ivelany. Miorina amin'ny toe-javatra tena izy, ny faritra amoron-dranomasina mifandraika dia namolavola ny laharam-pitantanana fandaminana ny baiko fandraharahana sambo iraisam-pirenena, miampy fikarohana sy fitsarana feno momba ny lalan'ny sambo, seranan-tsambo, fiovan'ny ekipa sns, ary ny famantarana ny loza mety hitranga. Mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny "fanaraha-maso feno, fanaraha-maso voalohany, fanaraha-maso voalohany, fanaraha-maso voalohany, ary fanamboarana voalohany", ny andrana asidra nokleika an'ny ekipa dia fenoina alohan'ny hidiran'ny sambo iraisam-pirenena amin'ny ozinina hamboarina; Tsy ekena ny fanovana ekipa alohan'ny hamoahana ny valin'ny fitsapana, ary tsy avela hiasa ny fanamboarana. Mandritra izany fotoana izany, ny orinasan-tsambo fanamboarana sambo dia takiana amin'ny fametrahana rafitra fisoratana anarana feno sy tatitra momba ny famonoana olona, ​​ary ny fanamboarana dia azo atao aorian'ny famonoana.